50 sano oo khaladaad juquraafiyeed ah oo ay sameeyeen hoggaamiyeyaasha Afrika - Afrikhepri Fondation
jimco, abriil 9, 2021
50 sano oo qaladaad geostrategic ah oo ay sameeyeen hogaamiyaasha Afrika
Thetaariikhdu waxay xuseysaa in heshiiskii Rome ee lagu aasaasayay Beesha Dhaqaalaha Yurub la saxiixay 25-kii Maarso, 1957. Waxa aan ka muuqan buugaagta taariikhda ayaa ah in saxiixaan markii hore la qorsheeyay 21-kii Maarso, 1957-dii oo dib loo dhigay 4 maalmood. Haa, buugaagta taariikhda (dhammaantood ay qoreen reer Yurub) kuma tiirsanaadaan faahfaahintaan, laakiin aad ayey muhiim ugu yihiin Afrikaanka. Sidaa darteed waa inaan qodqonaa xusuusta ay reebeen shaqsiyaad gaar ah oo kaqeyb galay xafladaan si aan u ogaano in taariikhda dib loo dhigay 4 maalmood mooska dartiis. Haa, waan ogahay inay kaa dhigi karto dhoola cadeyn, laakiin waa mid aad u culus. Sababtoo ah waa bilowga istiraatiijiyad caalami ah oo ujeedkeedu aasaasiga ahaa joogtaynta dhaqaalaha gumaysiga, xitaa wixii ka dambeeyay xorriyadda Afrika.Waxay qaadatay 4 maalmood oo gorgortan ah si loo ogaado sida lacagta caddaanka ahi u gumaysato, isagoo u adeegaya dalal gaar ah oo u adkaysan lahaa xitaa midawga cusub ee abuurka. Talyaniga, runti waxaa jiray maamul dowladeed oo ku saabsan mooska ka imanaya gumeysigiisa, Soomaaliya, iyo Faransiiska tan iyo 1932, waxaa jiray nooc ka mid ah guddi howleed si ay dalka u siiyaan moos ka yimid 5 deegaan oo kala ah: Cameroon, Ivory Coast, Madagascar, Martinique iyo Guadeloupe.
Muuska ayaa sidaa darteed looga muujiyey Axdiga Rome inuu yahay aalad xakameynta juquraafiyeedka ka jirta Wadamada Afrika, xitaa kahor xornimadooda ka dib oo ay aqoonsadeen fuliyayaasheeda. Oo maxaa yeelay 1960, Faransiisku wuxuu ku qasban yahay inuu aqoonsado madax-bannaanida 3-da waddan ee ugu horreeya, wax walba waa la qaban doonaa sidaas darteed waa dadka reer France ee ku haray gumeystihii hore inay daryeelaan mooska, kuna jiheeyaan bulshada maxalliga ah dhinaca dalagyo aad u yar sida suuf, kafee iyo kookaha. Waan arki doonaa sida.
A- Faa'iidada mooska
Muusku waa miraha ugu faa iidada badan aduunka maxaa yeelay waxaa la soo goostaa todobaadle waxaana lagu dhaqmaa sanadka oo dhan. Waxsoosaarkeeda wax ku oolka ah wuxuu ka kordhayaa 20 tan hektar halkii moos dabiici ah ee Senegal sida ku cad tirooyinka ay soo bandhigtay hay'ada wax soosaarka APROVAG APROVAG, Tambacounda ee Senegal, ilaa 60 tan hektar kasta oo ku yaal harooyinka lagu koriyo ee Morocco, sida ku cad tirooyinka la bixiyay. waxaa qoray Machadka cilmiga xoolaha iyo xanaanada xoolaha Xasan II ee magaalada Rabat ee dalka Marooko. Marka la barbardhigo, kookaha laga soo saaray halkii hektar 300 kg, marka loo eego tirooyinka ay bixiso CNRA, Xarunta Qaranka ee Cilmi-baarista Agronomic ee Côte d'Ivoire, oo uu shaaciyay Mr. Lancine Bakayoko markay ahayd 27/10/2009, taasi waa -in la dhaho doorashadii khaldanayd ee dhaqaale yahanada iyo siyaasiyiinta reer Ivory Coast, ilaa madaxbannaanidii beenta ahayd, beeralay kookaha ee Ivory Coast waxay 200 jeer ka faqiirsan tahay mooska reer Mooska ah Ka sii darane kafee. Sida laga soo xigtay daraasad aad u culus oo ay sameysay IRCC Machadka Cilmi baarista Kafeega iyo Cocoa ee Côte d'Ivoire, intii u dhaxeysay 1969 iyo 1982, waxaan ka helnay aagga Gagnoa celcelis culeyskiisu dhan yahay 180 kg oo bun ah halkii hektar. , taas oo ah in la yiraahdo dhaqaaleyahannada iyo siyaasiyiinta reer Ivory Coast waxay ogaal ahaan u yareeyeen beeraleyda saboolnimada 333 jeer ka xun dhiggooda, beeraleyda Morocco. Waxaan ka heli doonnaa xaalad isku mid ah meel kasta oo kale oo ka hooseysa Saxaraha Afrika.
B- Joqoraafi ahaan mooska
waxaa bixiyay Le Monde Diplomatique bishii Oktoobar 1996, waxaa qoray Ghislain Laporte, 52 milyan oo tan ayaa la soo saaray 1996 (100 milyan tan tan 2011). Iyo labadii wax soo saare ee ugu weynaa, Hindiya iyo Shiinaha, waxay wada cuneen waxsoosaarkoodii. Maxaa ku haray 11 milyan oo tan suuqa caalamiga oo 4 milyan oo tan ay aadeen Midowga Yurub. Iyo 2/3 oo ay gacanta ku hayaan laba shirkadood oo caalami ah oo Mareykan ah, United Brands Company (Chiquita brand) iyo Castel & Cooke (Dole brand), iyo mid Mexico ah: Del Monte. Waxa karaahiyo ah ee ku saabsan tirooyinkan waa laba cunsur oo muhiim ah: 1- Dhammaan 79-ka waddan ee loogu yeero ACP (Afrika, Kariibiyaanka iyo Baasifigga) ee Midowga Yurub ay u hayaan faa'iido aan la dafiri karin marka la eego heshiiska Lomé, Cotonou, si dirqi ah u labanlaab ah (857.000 tan) oo ah Jasiiradaha yar yar ee Isbaanishka (420.000 tan). Si dhif ah 4 jeer ayey ka badan tahay tan yar ee Martinique, oo leh 1.100 km2 iyo 382.000 oo deggan oo Midowga Yurub u keenay 220.000 tan oo muus ah, marka loo eego 802 milyan oo ka hooseeya Saxaraha Afrika (tirooyinka 2007).
2- Tirada, tirada wadamada 79 ACP waa saddex-meelood meel oo ka mid ah tirada loo dhiibay Midowga Yurub ee Koonfurta Ameerika, kaas oo aan ka faa'iideysanayn heshiisyadaas, sida 2,5 million tan.
Waxaa soobixi ka 2 kuwan, rabitaan ah inuu ka soo leexdo Africa soosaarid faa'iido sida muuska in this macquulka ah sida la sifaynayo gumeysiga (xataa ka badan 50 sano oo aqoonsi by madaxbannaanida West African), kaydin wax soo saarka beeraha Afrika, gaar ahaan reer galbeedka.
qaladka madaxda Afrika waxay ahayd in ay sii joogaan macquulka this gumeysiga in ay aaminsan yihiin in uu jiro runta kale dunida ka mid ah in ay doonaynin inay yimaadaan ka Midowga Yurub iyo taas oo keeni lahaa in caajisnimo a total, Mu'minaadka ah uu n ' waxay u taagan tahay suuqyada EU-da. Si anesthetize caajisnimo this yimid Non Dawladaha Ururada (NGOs) dhihi dhawrista kuwaas oo calaamadeeyey degdegga ah ee lagu badbaadinayo kaynta Afrika, laakiin magaciisa dhabta ah doorka ay ahayd in ay ka jeedin Africans ka hawlgalka meel this muhiim u ah abuurista soosaarid xad-dhaaf ah moos ku dhibin laga yaabaa ganacsiga aad u qaali ah oo moos ah suuqa dunida iyo in la xaqiijiyo madaxbanaanida dhaqaalaha dhabta ah ee Africa. Tani waxay tusaale ahaan ka mid ah muuska waa mid aad u calaamadaha xaaladda this dhacay dalalka khilaaf sida Senegal kuwaasoo la dayacay ay wax soo saarka gudaha u gaar ah oo moos ah in la soo dhoofiyo.
C- Maxaa muuska?
Dhowr xarumo cilmi-baaris ah ayaa ku salaysan xaaladda dabiiciga ah ee nafaqooyinka ku jira darbiga farta guska:
Qani ku ah potassium, mooska waa daawo dhiig kar. Waxaa sidoo kale lagu muujiyey waxa loogu yeero daawo kale oo dabiici ah oo looga hortago boogta caloosha, shuban. Qani ku ah birta, muusku wuxuu kiciyaa soosaarida haemoglobin, taasoo ka caawisa yareynta dhiig yaraanta. Muusku wuxuu ka koobanyahay fiitamiin B6, doorkiisuna waa inuu hagaajiyo gulukooska dhiiga.
Xitaa iyada oo aan la dhoofin, Afrika waa in ay sameysey saldhig ballaadhan oo macaamiisha muuska ah, sababtoo ah waxa abuuraya caanahan sidaas u caan ah waa fitamiin C-ga sareeya. muuska maalinlaha ah ayaa ku filan in la daboolo baahiyaha fitamiin C ee carruurta Afrikaanka ah. Waxaa jira suuq weyn oo weyn oo Afrika ka tirsan, iyada oo la siinayo tirada carruurta ee ugu badan iyo baahida fitamiinada.
D- Maskaxda dadka Afrikaanka ah ma kuwa hurda baa?
In tan 55.000 oo moos ah iibiyey caalamka oo dhan ayaa 2010, 40% ayaa la soo saaray ee Asia, 27% ee South America iyo% oo kaliya 13 ee Africa. Halkaas waxaa loo yaqaan 'muuska macmacaanka', taas oo ah in la yiraahdo, muuska wuxuu cunay midho, muuska bislaaday. Laakiin sida ka muuqata tirokoobyada bixiya FAO, in 1995 waxaa la soo saaray ee dunida tons 24.000 ee Green muuska karinta sheegay, oo tan 17.000 waxaa laga soo saaray in Africa, in ay tahay in la yidhaahdo 71 iyo 4.000% tons ee South America , waa 17%. Sidaa darteed, waxaanu awoodi karnaa in haddii Africans ma soo saari% 13 ee muuska dunida, ma ahan sababtoo ah naafada laakiin ay caajisnimo maskaxda awoodaan in ay bogsiiyaan kuwa danaha dhaqaale ee West tan iyo in waxay ku saabsan tahay wax ka qabashada suuqa; laakiin ma ahan, tan iyo markii ay timaaddo soo saarida cuntada, marka ay timaaddo in la helo dareenka noolaanshaha, waxay garaaceen dhammaan diiwaanka dunida. Sidaa daraadeed waxaan oran karnaa in maskaxaha Afrikaanka ah ay u muuqdaan inay seexanayaan marka ay timaaddo soo iibinta, si ay uga iibiso meel ka baxsan Midowga Yurub. markaas waa inay kugu mahad naqayaa talo xirfad leh aan sax ahayn in lavishes Midowga Yurub, in ay tahay in la yidhaahdo ku niyad-in ay soo saaraan muuska Suuq ilaa ay si buuxda ay gacanta ugu jiraan shirkadaha reer galbeedka rakibay Afrika.
In 2007, 65% oo moos ah iibiyey suuqa dunida ka labada dal hore ahaayeen qaxwada iyo kooxda heysata horyaalka haysta labada beeraha baabbi'iyey intii xukumo kafeega, si ay u tagaan muuska iyo waa British iyo Costa Rica Taasi waxa ay ka dhigtay isla sanadkaas 10 dhoofinta ugu weyn oo moos ah dalalka dunida, 7 ahaayeen ka South America, jidaynayey gobolka this si loo xakameeyo 95% oo moos ah ee laga dhoofiyey dunida. Dhanka kale, Africans ayaa isku diyaarineysa inay soo dhawraan sano 50 madaxbanaanida, laakiin weli dhibaato takhalusaya xamili amarka gumeysiga kaliya kafeega, kookaha iyo suuf, wax soo saarka la xiriira kale caan masaafurinta Afrikaanka ilaa Ameerika inta lagu jiro 4 qarniyo dheer.
1978, Marooko waxay go'aansatay inay mamnuucdo dhaqdhaqaaqa soo dejinta muuska. Boqorka ayaa si fudud u fahmay in muusku noqon karo aalad geostrategy ah oo ku jirta gacanta boqortooyada. In kasta oo xaaladaha cimilada ee aan fiicnayn sida (ka duwan Congo iyo Cameroon), Boqorka wuxuu go'aansaday inuu abuuro aqalka lagu koriyo oo qalabeysan oo diyaar u ah inuu soo saaro qaybo hoosaadyo ka kooban 1,53 hektar oo lagu kireeyay qiime deris ah muwaadiniinteeda. Marooko, oo soo dejin jirtay 24.000 tan oo muus ah sanad kasta 1978, laga bilaabo 1982 wixii ka dambeeyay waxay awood u leedahay inay daboosho baahideeda gudaha heerkii ka horreeyay xayiraadda. Sida lagu sheegay warbixin ay daabaceen 3 borofisar: Skiredj, Walali iyo Attir oo ka tirsan machadka cilmiga xoolaha iyo xanaanada xoolaha Hassan II ee magaalada Rabat, laga soo bilaabo 2 hektar bilowgii ololihii 1980/81, waxaan tagnay 2.700 hektar 1996 iyo 3.500 hektar 2011 , oo sanadkii la soo saaro in ka badan 100.000 tan oo moos ah
E- Maxaan sameeyaa?
Siyaasadda ujeedadu waa inay noqoto mid xagjirnimo leh iyo tilmaamaha 3:
1-40% ee muusiga oo laga soo saaro Afrika si loo helo suuq caalami ah. Si taa loo saxo, wadi sidii aannu ee Morocco kicin iyo abaabulo suuqa gudaha nidaamsan ururinta oo dhan muuska macmacaan diyaar u ah soo saarayaasha yar in aad ku fulan muuska oo ka soobixi bisil in tiro u dhiganta marka la codsado suuqa gudaha.
2-Democratize wax soo saarka muuska oo abuuraya jajab yar oo beerto. Tani waa habka kaliya ee lagu jebin karo dhaqanka gumeysiga ee muusiga muusiga adduunka ee weli jira maanta, ma ahan oo kaliya Africa, laakiin sidoo kale Martinique iyo Guadeloupe halka miraha miraha uu yahay mid adag si gaar ah gacanta ugu ah ee farcankii kuwii addoonsi jiray hore.
3 - Si loo soo saaro, waa inaad ogaataa sida loo iibiyo. Suuqa duulimaadka caalamiga ah sida alaabta lagu ciyaaro ayaa ka jawaab celinaya caqligalka gaarka ah ee waddan kasta, alaab kasta iyo dhaqan kasta. Mid waa inuu leeyahay dabacsanaanta maskaxda si uu u fahmo in dunidu aanay ku koobnayn dalalka 4 Yurub, xitaa haddii ay yihiin kuwa ugu qanisan. Waxaa jira marxalad aad u ballaaran oo loogu talagalay horumarinta muuska ee dalal badan sida Ruushka, Iran, Turkiga iwm ...
Waxaa jira suuq gudaha ah oo Afrikaan ah oo lagu qabsado, laakiin si loo gaaro, waa in la kiciyo lana soo saaro si loogu qanco. Si looga fogaado dabinka dalal badan oo ka tirsan qaybta muuska, waxaa si fudud loo baahan yahay in lagu muquuniyo ganacsiga mooska dhul yar oo aan ka badnayn 5 hektar iyo wixii ka sarreeya, si loo hubiyo oo loo hubiyo in milkiilayaashu yihiin kuwa aad u shaqeeya ee maalin kasta ka shaqeeya dhirtan. Tani waxay ka fogaan doontaa dhibaatada dhibta leh ee mala awaalka dhulka ee aan ka helno dalal gaar ah oo dadka asaliga ah ay gacmahooda xoqaan oo ay ka dhigaan addoomo meelo kale ka shaqeeya, sida gaar ahaan Côte d'Ivoire. Sidaas darteed iskaashatadu waa inay si dhab ah u mideeysaa kaliya beeraleyda qeybta ka ah mashruuca, iyaduna iyada ayaa mas'uul ka noqon doonta inay siiso beeraleyda geedaha mooska ugu horreeya. Markaa waa inay taasi mas'uul ka ahaato xakamaynta tayada iyo u hoggaansanaanta heerarka caalamiga ah ee gaaska iyo gaadiidka badda, si marka hore loo daboolo suuqa qaranka ka dibna loo raaco mid caalami ah.
Maanta, faa'iidada dhabta ah ee mooska ayaa ku jirta qaybinta. Siyaasad la'aanteedu ma ahan mid waxtar leh oo ay waxtar u leedahay in beeralayadayada ay ka soo baxaan dhibaatooyinka kafeega, kookaha iyo suufka haddii aysan ku xisaabtamin baahida loo qabo in si toos ah loogu dhiso magaalooyinka waawayn ee dalalkeena si loo helo nooc ka mid ah waxa loogu yeero "toosan". Waa qiimahaasi in ay suurtogal tahay in ay gudubto qaar ka mid ah jilicsanaanta la'aanta tartanka tartanka muusiga Afrikan, oo muddo dheer ku sugnaa caqiidada caalamka ee qaarada Afrika ee Yurubta. Si loo joojiyo caqliga guntan ee muusiga hadda, waxaa lagama maarmaan ah in la gaaro marxaladdan milkiilayaasha yaryar iyo in laga fogaado wixii si toos ah looga faa'iidaysto shirkadaha caalamiga ah. Waa qiimaha aan ku guuleysaneyno dib-u-habeyn dhab ah oo ah murgacashada miro-badeedka ugu badan ee aduunka, muuska. Tani waxay horeba u dhacdaa wadamo badan oo Koonfurta Ameerika ah, marka laga reebo Afrika, dawladaha ayaa ka wada xaajoonaya in ay ku qasbaan shirkadaha caalamiga ah in ay joojiyaan soo saarista naftooda, oo ay si toos ah uga iibsadaan sanduuqyada muuska. .
Tusaale ahaan wadashaqeynta APROVAG (ururka wax soo saara, Tambacounda) ee degmada Missirah ee Senegal, waxay u muuqataa mid xiiso leh in la tilmaamo laguna qabsado meelo kale oo Africa ah. Waxay isu abaabuleen inay u qaybiyaan 16% dhulkooda, tusaale ahaan, 0,25 ee 1,63 hektar kasta oo dhirta,
wadarta 250 hektar oo loo maro muuska sii kordhaya, si lacag loogu helo. In 2008, wax soo saarka ahayd tan 5.000 (khasaara ah 20% la'aan ku fulan iyo 5% baabba'nay isu beeralayda), iskaashi ka iibiyey 4.000 tan oo moos ah, isagoo fahamsan 640.000.000 a Guruubyada dalalka yaryar CFA (€ 975 760) dadka tuulada this lagu qiyaasay ku dhowaad deggan 52 845, iyo margin shabag faa'iido: 1 561 000 CFA halkii hektar ee bulshooyinka reer miyiga ah 3: Missirah, Dialacoto iyo Netteboulou. iskaashi waxa uu doortay ciqaabaan yareysey saarka tons ay 20 halkii hektar, si loo ilaaliyo caafimaadka ee xubnihiisa, kuwaas oo nacday Bacriminta kiimikada kaas oo ah isha ugu muhiimsan ee faraxsaneyn in loogu yeero moos warshadaha.
Xajmiga iyo ilaalinta:
Muusku waa midho loogu yeero miraha cimilada, taas oo ah in la yiraahdo bislaanshihiisa waa la xakameyn karaa si loo yareeyo qasaaraha, loona xakameeyo suuqgeyntiisa, iyadoo ay ugu wacan tahay acetylene ama ethylene, wax soo saarka warshadaha kiimikada, oo laga helay gaaska. Mooska laga soo ururiyay soo saarayaasha yaryar waa in isla markiiba lagu kaydiyaa bakhaarro qabow oo loo yaqaan "qolal bislaada". Halkaas, waxaa lagu daaweeyaa acetylene heerkul gaar ah iyo qoyaan u dhexeeya 18 ° C ilaa 14 ° C 4 maalmood gudahood si ay u bislaadaan ama u xasilloon yihiin 6-7 ° C kaydinta.
G- ACP-EU iskaashi aan loo baahnayn oo laga yeesho dhadhanka gumeysiga
50 sano ka dib aqoonsiga Yurubiyaanka ee madax-bannaanida dhowr dal oo Afrikaan ah, waqtigaan ayaa laga yaabaa in uu yimaado si xor ah u madaxbannaanaanta. Maanta, dalalka 46 Afrika ayaa ku jira xaalad maskaxeed oo maskaxeed, oo si dhib leh u muuqata tusaale ahaan muuska. Afrika waa inay leedahay dhiiranaan ka soo baxda qaan-qarninta adoo qaadanaya go'aanka xag-jirka ah ee xagjirka ah iyo wargelinta Midowga Yurub in ay joojinayso dhamaan caqabadaha ay ku maareynayaan . The tusaale walbaana waa isutagga caanka loo yaqaan ACP (Afrika Caribbean iyo Pacific) waa caddayn nool gumeysiga ma dhammeeyayna oo sabab wanaagsan:
1 - Ma aha qaar Afrikaan ah oo qaatay dadaalka abuuritaanka. Taas macneheedu waxa weeye in kooxaha noocaas ah ay u maleynayaan inay kaliya yahiin Yurubiyaanka si ay uga jawaabaan danaha gaarka ah ee Yurub. Waxa kaliya oo ay u malaynayaan in ay ku sameeyeen danaha Afrikaanka ah xitaa ka caagan yihiin sirdoonkooda. Labada xaaladoodba, sawirka Afrika wuxuu ka soo baxayaa qalqal gabi ahaanba.
2 - Waa wax aan caadi ahayn in dalalka 46 ee dalalka Afrika ka hooseeya Sahara ay ku lug leeyihiin dood kasta oo ay la leeyihiin Midowga Yurub, marka laga reebo wadamada Waqooyiga Afrika, inkastoo Midowga Yurub uu isu keeno wax kasta oo mawduuca doodda, wax kasta oo meesha ah.
Xarunta 3- The CPA ee Brussels, iyo in 100% maalgeliyey Midowga Yurub, kaas oo gebi ahaanba waa la aqbali karin in la eego calaamad ka mid ah, waayo dalalka isu rumaysan madax banaan muddo ka badan 50 sano . Haddii ACP-du ay tahay waddamada ay khuseyso, maxaad u sharaxeysaa in kursigu uusan ka mid ahayn wadamada xubnaha ka ah ee shirkadan? Maxaa dhacaya marka danihiisa uu kala duwan yahay kuwa Midowga Yurub? Xaqiiqadu waa qadhaadh waxayna tahay in hoggaamiyayaasha Afrika ee jahawareeriya nooca noocan ah, ay aaminsan yihiin si daacadnimo ah oo sharaf leh oo ay u qaban karto shaqada ay ku abuuri karaan, si loo abuuro xalal asaasi ah oo lagu dhisayo farxad iyo barwaaqada dadkooda. Maxaa sharafta Afrika rasmiga ah waxa uu dareensan yahay marka guri iyo quudin kharash ka ah Midowga Yurub? Waa nooc sax ah oo ah dhilleysiga caqliga ee wadamada Afrika.
4- Marka 1973, Boqortooyada Midowday ku biirto Midowga Yurub, labo sanno ka dib, 1975, waxaa jira kordhin mucjiso ah tirada dalal xubno ka tirsan ACP. Mucjisadan yar waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in Boqortooyada Ingiriiska ay soo saartay xubnahooda gumeysiga ah ee "Commonwealth" caanka ah. Tani waa caddaynta xaqiiqda ah in ACP ay tahay urur gumeysi ah oo ka shaqeeya gebi ahaan gumeysiga, sababtoo ah wadamada u hoggaansamaya waxay ku jiraan maskaxda abuurayaashooda, wax ka badan ama ka yareyn deegaanada. Afrika waxay ku fiicnaan laheyd inay ka baxdo.
5- Ecuador oo aan ahayn xubin ka mid ah ururka in la siiyo in 2011, 40% oo moos ah dunida oo dhan laga dhoofiyey, iyada oo ku dhowaad 5 000 000 tan oo moos macmacaan. Si loo dabagalo waxa loogu yeero ACP ee la ilaaliyo si ay u tirtiraan guud ahaan suuqa, Midowga Yurub wuxuu bixiyay wadaagida 79 Dalalka ACP, wareega 220 million euros, taas oo ah in la yiraahdo celcelis ahaan 2,70 million euro midkiiba. Maxaa loogu talagalay? Si loo xaliyo dhibaatada? Ku maqan.
Istaraatiijiyeynta gobolaynta xiriirka caalamiga ah oo ay dejisay Midowga Yurub oo looga golleeyahay in la xoojiyo oo la wiiqo lammaanayaasheeda koonfurta aduunka ee sidaas ku xalliyay xiriirka aan kala go'a lahayn ee xisbi ka hadlaya hal codka oo doortaan qaabaynta iyada oo la raacayo hamigeeda iyo danaha gaarka ah, lammaaneyaasha oo ah koox ahaan sida kooxda ACP. Afrika waa in ay fahmaan in qarniyadii addoonsiga iyo rabshadaha gumeysiga aan la ciribtiri karin iyada oo aan la ogaan karin baahida muhiimka ah ee duufaanta maskaxeed ee la soo dhaafay, si ay u xoreyaan naftooda xorriyadda. Dhamaan farsamada, dhammaan dayactirada loo yaqaan ACP ama CEMAC, ama ECOWAS waa qaabab dabiici ah oo ujeedadoodu tahay in la kala qeybiyo Afrikaanka oo looga hortago soo bixitaanka Mareykanka ee Afrika
H- Waa maxay casharada loo leeyahay dhalinyarada Afrika?
dhallinyarada Afrika waa in ay awoodaan in ay weydiin su'aal muhiim ah, sababta Midowga Yurub fragmenting qaaradda Afrika ee koox ugu macquul ma khuseeyo laftiisa in talooyinkan, tusaale ahaan iyadoo la abuurayo koox ka mid ah dalalka hore communist EU, koox ka mid ah 6 aasaasay xubno ka tirsan Midowga Yurub, koox ka mid ah dalalka xuduud badda Mediterranean si ay Midowga Yurub, isutagga ka mid ah dalalka Atlantic ee Midowga Yurub ??? Dhibaatada dhaqaale ee Galbeedka waxay cadeyneysaa inaysan jirin dal qani ah oo qani ah ama dal xun, waxaa jira dad badan oo hodon ku ah wacyigelinta danaha gaarka ah iyo kuwa saboolka ah ee wacyigelinta. cadowga ah ee qaaradda Afrika, ma Midowga Yurub, waa miskiin Afrika waxaa maskaxda oo keceen in jecel yahay inay wax ka qabtaan by wakiil oo arag ah kooxaha Yurub si toos ah kubadda cagta qaranka xitaa haddii uu marna muujiyay meel kasta for kartida tababarenimo, toosiyaan shirkadaha dadweynaha ugu weyn, inkastoo goolka guusha ee Lotto this Afrika ayaa marna ku cadaato in ay awoodda ka Tababaraha eber qu iwm ... waa maxay sabab u noqon karta in wadamada ay ku sii jiraan addoonsiga qaxwaha iyo kookaha leh celinta 180 kg hektare kasta oo la iloobo muuska ay soo dejiyaan, halka ay ku ogaan karaan muuskaas waxtarka ugu yar ee 20 tan hektar ah? Maaha arrin muhiim ah, hadii Yurub uu yiraahdo waa waxa saxda ah ee la sameeyo, haa, waxay u badan tahay inuu isagu sax yahay. Maxay tahay sababta ay u kala duwanaan lahayd, tan iyo awowgiis uu lahaa gacanta sare ee miinada; maxaa yeelay, xataa ilaahiisu waa ka adkaadeen ilaahyadayda; maaddaama uu rootiga sarreenku uu bedelay alwaaxkaygiisa, masagada, masagada, manioc; maadaama uu magacyadiisa koowaad ee bedelay miino; maxaa yeelay, carrabkaygu waa beddelaa tan iyo markii uu lacagtiisa bedelay mine; tan iyo markii madaxweynayaashu ay dileen madixii; Sababtee, maxaa yeelay, ma ahan mid foolxumeyn lahaa marka uu ii doorto ciyaartoyda xulka qaranka? Marka uu go'aan ka gaaro meeshan aan ku qasbanahay in aan taabto kaynta si aan u abuuro beerahayga, waaba in adduunka oo dhan uu u nugul yahay la'aanta oksijiin ka imanaya duurka Waa arrin muhiim ah marka uu amaanayo mudnaanta kookaha iyo talooyin i siisey in uu halkaa joogo oo uu ku noolaado quruxdiisa si looga dhigo quruxda qaar ka mid ah chocolatiers ee Brussels, Paris ama Vienna. Waa hubaal wax walba waa sax. Haddii tani aysan ahayn kiis, miyaan ahay mid caadi ah?
Jean-Paul Pougala waa muwaadin reer Cameroon ah ahna Agaasimaha Machadka Daraasaadka Geostrategic ee Geneva ee Switzerland
Nolol firfircoon iyo hurdo la’aan
La soco Mareykanka Afrika (2012)
Joogitaanka Koorsada - Wayne Dyer (Audio)